नेपाल आज | बिनाबिवाह आमा बनेका बलिउडका ५ अभिनेत्रीहरु , एकले त प्रेग्नेंसीको खबर थाहा पाएर गुपचुप बिवाह नै गरिन !
बिनाबिवाह आमा बनेका बलिउडका ५ अभिनेत्रीहरु , एकले त प्रेग्नेंसीको खबर थाहा पाएर गुपचुप बिवाह नै गरिन !
एजेन्सी , बलिउडमा पछिल्लो समय अविवाहित अभिनेत्रीहरुको प्रग्नेंसीको खबर लगातार बाहिरिरहेको छ। यतिसम्म कि बलिउडमा बिवाह भन्दा पहिले नै आमा बन्ने ट्रेड सुरु भएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। केहि समय अघि मात्र अभिनेत्री कल्की कोचलिनले आफु प्रेग्नेंट भएको खुलासा गरेकी थिइन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी बलिउडका बिवाह अगावै प्रेग्नेंट भएका केहि अभिनेत्रीको बारेमा कुरा गर्न जादै छौं आउनुहोस ,
हालै मात्र अभिनेत्री कल्कीले आफु प्रेग्नेंट भएको बताएकी छिन। एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै कल्किले आफ्नो गर्भमा ५ महिनाको बच्चा भएको र उक्त बच्चालाई वाटरबर्थको माध्यामबाट जन्म दिन चाहेको बताएकी छिन।
कल्की ब्वाईफ्रेन्ड 'गे हर्सबर्ग' को बच्चाको आमा बन्न लागेकी हुन्। पति अनुराग काश्यपसंग सम्बन्ध बिच्छेद भएपछी कल्की गेसंग रिलेसनशिपमा रहेकी छिन।
अभिनेत्री यमी ज्याक्सनले पनि केहि समय अगाडी एक छोराको जन्म दिएकी हुन्। अविवाहित एमिले प्रेमी जर्ज पायनिटूको बच्चालाई जन्म दिएकी हुन्। प्रेग्नेंट भएको केहि समय पश्चात इन्गेग्मेंट गरेका यी दुईको आउँदो वर्षा बिवाह हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
बलिउड अभिनेत्री एवम मोडल ब्रुना अब्दुल्लाहले पनि केहि समय अगाडी छोरीको जन्म दिएकी हुन्। बिवाह अगावै एक छोरीकी आमा भएकी ब्रुनाले प्रेग्नेंट पछि मात्र प्रेमी एलेन फ्रेसरसंग बिवाह गरेकी हुन्।
मोडल गैब्रियला डेमेट्रियड्सले पनि बिवाहपुर्व नै केहि महिना अघि एक छोराको जन्म दिएकी हुन्। उनि अभिनेता अर्जुन रामपालका छोराका आमा बनेकी हुन्।
अभिनेत्री नेहा धुपिया पनि बिवाह पुर्व नै प्रेग्नेंट भएकी हुन्। प्रेग्नेंसीको खबर थाहा पाउने बित्तिकै नेहाले प्रेमी अंगदसंग गुपचुप बिवाह गरेकी हुन्। बिवाह भएकी करिब ६ महिना पछि मात्र उनले आफु प्रेग्नेंट भएको खबर सुनाएकी थिइन्।